Q2 2077/78(Q2 2077/78) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
खुद बीमा शुल्क र नाफा आर्जनमा नेपाल लाइफ अग्रस्थानमा, अन्यको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाण्डौ । नेपाल हाल १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। ती सबै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकांश जीवन बीमा कम्पनी व्यवसाय आक्रामक ढंगले बढाएको देखिन्छ। जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेपाल लाइफले सर्वाधिक खुद बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ। कम्पनीले ३१ अर्ब ९६ करोड...
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी : बीमाशुल्क आर्जन २५.९४%ले बढ्यो, नाफा रु. ५३.६९ करोड
काठमाण्डौ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद बीमाशुल्क ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले निर्जीवन व्यवसायबाट ३ अर्ब ४० करोड र जीवन व्यवसायबाट ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो। जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा...
बरुण हाइड्रोपावरको नाफा ६१.६२%ले घट्यो, विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा पनि संकुचन
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नाफा ह्वात्तै घटेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बरुण हाइड्रोपावरले खुद नाफा ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६१.६२ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले २ करोड २९ लाख...
राष्ट्रिय बीमा संस्थान : खुद बीमा शुल्क रु. ५.६८ अर्ब, जीवन बीमा कोषमा २२.१८%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद बीमा शुल्क आर्जन ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थानको समीक्षा अवधिको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ०.१८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खुद बीमा खुल्क...
किसान लघुवित्तको नाफामा उछाल, रिजर्भमा पनि छलाङ
काठमाण्डौ । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ७३१.१७ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ४४ लाख ७६ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको...
शिखर इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन रु. ७४.४५ करोड, दाबी भुक्तानी २०.८५%ले घट्यो
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ७४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २.६१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ७२ करोड ५६ लाख...
नेको इन्सुरेन्स : नाफा ६०.२२ले बढ्यो, बीमा शुल्क आर्जनमा ३०.०२%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ९४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३०.०२ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ७० करोड ९९ लाख रुपैयाँ...
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन रु. १७.०८ अर्ब, जीवन बीमा कोषमा रु. १ खर्ब बढी
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २२.८४ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन १३ अर्ब ९१...
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन ४०.९९%ले बढ्यो, नाफा कति ?
काठमाण्डौ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४०.९९ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ३ अर्ब ८८...
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको नाफा ३३.४५%ले बढ्यो, ईपीएस रु. ६९.३१
काठमाण्डौ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३३.४५ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन...
स्वाबलम्बन लघुवित्तको नाफामा घट्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३०.२३ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स : बीमा शुल्क आर्जन ९२.०६%ले बढ्यो, नाफा कति ?
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ९२.०६ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ५७...
एसियन लाइफ : खुद बीमा शुल्क आर्जन रु. ३.१३ अर्ब, नाफा ४५.०२%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३७.१९ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन २ अर्ब २८...
साना किसान विकास लघुवित्तको नाफा रु. ३१.७३ करोड, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको खुद नाफा ५.२० प्रतिशतले बढेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ३० करोड १७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिमा...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको नाफा ४४.९७%ले बढ्यो, ईपीएस रु. १०१.६२ पुग्यो
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको खुद नाफा ४४.९७ प्रतिशतले बढेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिमा...